Dharkeenleey - Wikipedia
Qoraalka bogan waa mid la tirtiri rabo, hadii cadeymo loo heli waayo.
Qoraalka bogan waa mid uqoran si qaab daran ama ka samaysan luuqad qalaad. Fadlan naga caawi turjumaada.
Ceel dheere, Showriyaha, Dabaqeen, Aabagedo, Kuweyt, Suuq boocle, Quraca waanjeesha, Suuq liif, Xoosh, Buula qaran, Kaxda, Macmacaanka, Suuq yaraha, salaama, Tawakal, tabakaayo madow, nuur aduunyo.
Hertel 061, Telecom 021 Nationlink 043
Degmada Dharkeynley waxay ka mid tahay degmooyinka magaalada Muqdisho waxay xigtaa dhanka koonfur galbeed.
Dharkeynley iyo wadajir markii hore waxay isla ahaayen hal degmo mar dambe ayaa labo degmo laga kala dhigay. halka xuduudeeda u ah labada degmo ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay wadada xaaji maxamed ee Suuq yare.
Degmada Dharkeynley waxaa waqtiyadii dagaalada ay ka socdeen xamar ee itoobiyaanka, ku soo qaxay dad fara badan oo degnaa Magaalada inteeda kale.
Degmada Waxay soo martay marxalado kala duwan waxaana lagu tilmaamaa meelaha istaraatiijiga ee ka yaala Xamar.
Waagii burburka waxaa maaamuli jiray hogaamiyo kooxeedyo kala duwan sida: Muuse Suudi, Xuseen Caydiid waxaana ka dhici jiray mar mar dagaalo aan sidaa u cusleyn.
Xili danbe waxaa xukunkeeda soo maray; Maxkamadaha Islaamiga, Jabhadda Islaamiga. Haddana waxay degmada hoos tagtaa maamulka Gobolka Banaadir ee Soomaaliya.
> Xaafadaha Dharkenley
Xaafada Ceel dheere, Showriyaha, Dabaqeen, Aabagedo, Kuweyt, Suuq boocle, Quraca waanjeesha, Suuq liif, Xoosh, Buula qaran, Macmacaanka, iyo kuwo kale.
> Masaajida ku yaala dharkeenley
Masaajido badan ayaa ku yaala degmada sida misaajidka dabaqeyn, uunlaayo, Masjidka Saldhiga Galbeed, Xaaji Maxamed, sh cabdixafiid, Rabi Sali al-nuur, Al- raxma Ceeldheere, Salaam, Macallin nuur,Khaliilu Raxman,
> Suuqyada Caanka ee ku yaala dharkeenley
Suuq boocle, Suuq yare iyo Suuq liif
> Meelaha caanka ee dharkeenley
• Saladhiga Galbeed
• Tabakaayo madoow
• Shaneemo Muqdisho
• Garaashka macallin nuur
• Garaashka xaajigaboow
• Tornada cisoow (biyo dageenka)
> Goobaha Caalamiga ee ku yaala Dharkenley
• Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (Gaheyr)
• Safaarada Mareekanka
• Warshada daawada
• Warshada hargaha
> Laamiyada Waaweyn ee Mara Dharkenley
• Jidka Jaale siyaad
• Wadada Dharkeynley (dhanka xoosh)
• Wadada Afgooye (Dhanka JUS ama Gaheyr)
> Dugsiyada Dawlada ee ku yaala Degmada
• Dhame yaasiin Cartan
• Cali Xuseen
> Dugsiyada gaarka ah ee ku yaala degmada
• Abuubakar Sadiiq (Dabaqeyn)
iyo Dugsiyo kale oo fara badan
> Tartan Aqooneedka degmada dharkeynley
Degmada waxay ku guuleysatay tartan aqooneed kii ramadaanka ee 2013 oo ay ku tartamayeen in ka badan 28 degmo oo ka kala yimid gobalada dalka oo dhan. sidoo kalana tartankii ramadaan ee 2020 waxay gashay kaalinta labaad.
> Ciyaaraha iyo Kooxaha ka jira dharkeenleey degmada waxaa ka jira kooxo badan oo kubada cagta sida kooxaha:
• AL RAASHID
• SUUQ YARE
• AL IIMAAN
• AL-AHLI DHARKEENLEY
• FC GODEEY
• XOOSH FC INTER BOYS
Degmada Dharkenley waxay ku fiicanyihiin ciyaaraha isboortiska gaar ahaan kubada Cagta waxaana ay ahaayeen guuleystayaashii 2011 iyo guuleytayaashii sanadkii ugu danbeeyay ee 2020 ee ku guuleystay tartanka degmooyinka G/Banaadir ayagoona ka qaaday degmada Waaberi.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharkeenleey&oldid=203841"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Luuliyo 2020, marka ee eheed 10:30.